PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: မြန်မာပြည်၏ ပန်းတော်ဦး ရောင်းရန်ရှိသည်
၁၉၈၈ သွေးမြေကျ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြီး၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်က ဥပဒေမဲ့အခြေနေတခုလုံးဆီသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရပြီး၊ အနာဂတ်ရှေ့ခရီးအလားလာက ကြောက်ခမန်းလိလိတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။ စစ်အာဏာပိုင်များအဖို့မှာ အထွေထွေ ချွတ်ခြုံကျအောင်ဖန်တီးပေးပြီး လူတဦးခြင်း၏ အသက်ရှင်းနေထိုင်ရေး စီးပွားဖြစ်တည်မှုဘ၀ ဘုံးဘုံးလဲကာ လှဲနေလှေအောက် မြင်းစောင်းမကျန် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်တို့အား ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် ဥပဒေအား အလုံးစုံ ပိတ်ပင် အမှောင်ချကာ အုပ်ချုပ်ကြလေ၏။
In the aftermath of the second military bloody coup in 1988 the lawless situation deteriorated further. The authorities continue to enjoy absolute impunity for all violations of political and economic rights and rule of law is denied throughout the country resulting in the collapse of individual economic life and leading to general poverty.
စစ်အစိုးရဆိုသော ခေါင်းစဉ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်များက ကျေးလက် ဒေသများတွင် သူတို့ကို သူတို့ မဟာ စစ်ဘုရင်ကြီးများသဖွယ် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ကြပြီး ထိုကျေးလက် ဒေသများတွင်၇ှိသော ရွာသူကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်သူများအပေါ် သူတို့ အလိုရှိသလို
အမှောက်အလှန် အမျိုးမျိုး လုပ်နေခဲ့ကြ၏။
Under the military government, Burmese Army commanders act as warlords in rural areas where they order the village headmen and local authorities as they wish.
မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ “ကိုဖန်ကန်း သဘောတူစာချုပ်” ဟုအမည်ရသော ယူအန်နှင့် ပတ်သက်သော အဖွဲ့စည်းများဖြစ်သည့် အရေးပါသော အဖွဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီစဉ် အဖွဲ့ ( ယူအန်ဒီပီ)၏ သဘောတူချက်ကို မျက်နှာလွဲခဲပစ်လုပ်ထားပုံမှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်က သဘောတူထားသော ကုလသမဂ္ဂ၏ “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အခွင်းရေး” ဆိုသည့်ကြေငြာစာတမ်းမှာ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံနေရသည်။
While the military regime ignores the Copenhagen agreement, some UN agencies, mainly the United Nations Development Programme (UNDP), disregard the 1986 UN Declaration on the Right to Development.
ကြေးလက်ဒေသများ၏ နေ့တဓူဝ ၀င်ငွေရှာပုံမှာ တောက်တိုမယ်ရလေးများရောင်းချခြင်း၊ ချဲထီ နှင့် အခြားသော လက်ဖြစ် အ၀တ်ထည် များအပါဝင် စိုက်ပျိုးသီးနှံပင်တို့ဖြစ်၏။ သို့တိုင်အောင် ကြီးမာသော အလုပ်လက်မဲ့ အမျိုးသမီးဦးရေမှာ များပြားလွန်းသည်မို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ် နှင့် အခြားသော အာရှနိုင်ငံများသို့ တရားမ၀င်သွားရောက် ခိုပုန်းအလုပ်မျိုးစုံလုပ်ကိုင်ရာမှ အချို့ အမျိုးသမီးတို့မှာ လိင်မှု ဆက်ဆံဖျော်ဖြေရေးနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြလေ၏။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်လာအရ လိင်ဖျော်ဖြေ ဆက်ဆံခြင်း လုပ်ငန်းသည် အလွန်ပင် ခွင့်ပြုလက်ခံနိုင်မှုမရှိစေကာမူ စီးပွါးရေးမပြေလည်မှု အခြေနေဆိုးနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာများအပြင် လုပ်အားခ အလွန်နည်းပါးသော ကြောင်းရာနှင့် လူတန်းစားအမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနားမှုတို့က ၄င်းတို့ ဘ၀ ရှင်သန်ရပ်တည်နေထိုင်ရေး အရ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းသို့ ၀င်ရခြင်း ဖြစ်ရလေ၏။
Income in rural areas is earned by selling consumer goods and chai (illegal lottery tickets), trading, dress-making, mat-knotting, plant growing and rice harvesting. However there are large numbers of unemployed women, many of whom enter Thailand, China and other Asia region, illegally to find work in the fishing, construction and sex industries. Selling sex is culturally unacceptable in Burma, but due to deteriorating economic conditions, low wages and unemployment, women from different communities and classes have become sex workers in order to survive.
မြန်မာ အစိုးရမှ ဆင်နွဲလာသော စစ်မက်ဖြစ်ပွါးနေသည်ဒေသအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများအဖို့မှာတော့ အတင်းအဓမ္မ အလုပ်စေခိုင်းခြင်း(ပေါ်တာ)၊ အကျဉ်းရုံး ကွပ်မြက်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပဲ အတင်းကြပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း နှင့် အတင်းအဓမ္မ ဘလက်ကာယ မုဒိန်းကျင်ခြင်းတို့ ရင်ဆိုင်ရန် မ၀ံ့သာသောကြောင့် ၄င်းတို့နေထိုင်ရာ အိမ်များမှ ထွက်ပြေးကာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ပြေးဝင်ခိုလှုံလာခဲ့ကြရ၏။ သို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအဖို့ ကလိမ်ကျသော လူလိမ် လူလည်များ (အထူးသဖြင့် အခြား မိန်းမလည် လူကုန်ကူးသူများက) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လစာကောင်းသော အလုပ်များ ရရှိမည်ဟု အယုံသွင်း ခေါ်ဆောင်လှည့်ဖြားခြင်း ခံရကြလေ၏။ ထိုနောက် အတင်းအကြပ်ပင် အပြစ်ကင်းစင်သော အမျိုးသမီးများမှာ လိင်မှုဆက်ဆံဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းခြင်း ခံကြရကာ အဆုံးတွင် ၄င်းတို့အတွက် ခုခံအားကျဆင်းစေသော ရာဂါပိုး အေအိုင်ဒီအစ် ဝေဒနာသာ ကူးစက်ရရှိခံစားရသော နိဂုံးများဖြင့် အဖြေ ရလဒ် ဖြစ်စေခဲ့ရသည်။
Many women in the war conflict zone waged by Myanmar government have also fled their homes and illegally migrated to Thailand in the face of rape, arbitrary arrest, summary execution and forced labour. Women are deceived by (often female) traffickers into believing that they will haveagood job in Thailand, but are then forced into prostitution, resulting in the massive spread of HIV/AIDS.
လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း (ပြည့်တန်ဆာ)၏ မူရင်းရေသောက်မြစ်သည် အမျိုးသမီးတို့၏ အညီမျှခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသော စီးပွါးရေးဆိုင်ရာအခွင့်ရေးများ လစ်ဟင်း ပိတ်ဆို့ခံရမှုနှင့် မိသားစု ဆင်းရဲနုံခြာ မပြေလည်မှုတို့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပြီး၊ ၄င်းအချင်းရာများအား အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စစ်အစိုးရမှ (စီအီဒီ အေ ဒဗလျူ) ဆိုသော အမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားဆန့်ကျင်သည့်အခြေနေများအားလုံး ကုကွယ်အထောက်ပံပေးဆောင်ရွက်ရေး နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်အား တဖက်လှည့် မျက်နှာလုပ်ကာ လက်မှရေးထို ပြထားခဲ့သေးသည်။
The root cause of prostitution is family poverty directly related toalack of equal economic rights for women and is perpetuated by the military regime - the same regime which ratified by tricking to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
ထပ်မံ အတည်ပြုတင်ပြရသော်၊ ပြည်နယ်တိုင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် မြန်မာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများကိုယ်တိုင်ပင် လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြည့်တန်စာ လုပ်ငန်းခွင်တို့တွင် တိုက်၇ိုက် ပတ်သက်နေလေသည်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပင် လိင်ဖျော်ဖြေမှု လုပ်ငန်းသည် တရားမ၀င်သော လုပ်ငန်းတခုအဖြစ်ရှိနေသော်ငြား ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှ သက်ဆိုင်ရာ အဏာပိုင်များနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင်ွအတွက် လာဒ်ထိုးထားရပြီး အချို့အာဏာပိုင်များမှာ ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြည့်တန်စာ လုပ်ငန်းများတွင် အချိုးကျအစုရှယ်ယာများ ပါဝင်ထည့်သွင်းလုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အချို့သော အခြေနေ ဖြစ်စဉ်များတွင် အာဏာပိုင်နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာ၇ှိများကိုယ်တိုင်ပင် အပိုဝင်ငွေလုပ်ငန်းအဖြင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းအား ကမကထပြုကာ လုပ်ကိုင်နေကြလေ၏။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အများက သတိမပြုမိသော လိင်ဖျော်ဖြေမှုရောင်းဝယ်ရေးမှာ အမှန်တကယ် ထိုင်း အမျိုးသမီးများမဟုတ်ကြပဲ မြန်မာ ၊ ကမ်ဘောဒီးယား လာအို အစရှိသော နိုင်ငံများမှ အများဆုံးဖြစ်နေ၏။ ဆိုရပါသော် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးများကို ဒေသတွင်း အာရှနိုင်ငံများတွင် များစွာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများထဲတွင် တွေ့ရှိရသည့်အပြင် ၄င်း၏ ပြည်တွင်းဒေသတလျောက်တွင်လဲ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး၏ တိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးခြင်း ဘေးဒဏ်အား ခံစားရပြီးနောက် ထိုးအခြေနေဆိုးမှ မြို့တော် ရန်ကုန်အပါဝင် လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ အကြီးကျယ်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားလေသည်။
Most sex tourists in Thailand are unaware they may actually not be withaThai woman at all... in fact, it's highly likely the woman may be from Myanmar (or Cambodia, Laos...). Burmese women can be found working in many countries in the Asia region, including domestically and it's reported that Nagis catastrophic typhoon has led toahuge increase of commercial sex workers in the capital Yangon.
ထိုင်းနိုငံအတွင်းမှ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသည် အခြေနေ ပုံစံတမျိုးသို့ အလှည့်ပြောင်းဖြစ်နေလေပြီ၊ အကြောင်းမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများအား ထိုင်းအမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင် မှုအား ကန့်ကွက်ခြင်း အသိပညာပေးခြင်းနှင့် လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တို့၏ ဆော်သြဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် နှစ်စဉ် ၄င်းလုပ်ငန်းတွင်းသို့ ထိုင်း သမီးပျိုများ ပါဝင်လာမှု လျော့ကျလာသည်။
Prostitution in Thailand is changing its face. Because of persistent
campaigning by the government as well as non-governmental organisations
(NGOs), each year fewer Thai girls enter the sex business.
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင် တဖြေးဖြေးမြင့်မားလာသော လိင်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ နိုင်ငံခြားမှ အမျိုးသမီးများအား အစားထိုး သွတ်သွင်းသော နည်းစနစ်အား လူကုန်ကူးသူများမှတဆင့် သဲသွင်းစေခဲ့သည်မှာ ထိုင်းအမျိုးသားများအဖို့ အသစ်ဆန်း လူမျိုးကွဲများအား မြည်းစမ်းလိုသော ဆန္ဒနှင့် ဈေးနုံန်းသက်သာပြီး အများပြား ရွေးချယ်ပျော်ပါးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်လေ၏၊ နိုင်ငံတကာ လိင်မှုဆိုင်ရာ လူကုန်ကူးမှု တာဆီးတိုက်ဖျက်ရေးသည် ကျမတို့၏ အိမ်နီးချင်းအိမ်ရှင်နိုင်ငံများအတွင်းသို့ပင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအား လိင်မှုဆိုင်ရာ စောင်ကြည့်စာတန်းပြုစုနေသော ဒေါက်တာ ခရစ်တယာက ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာတွင် အတိလင်းရေးသားတင်ပြ အကြံပေးခဲ့ဘူးသည်။
To meet the steadily high demand, foreign girls, therefore, are recruited instead. This technique is becoming more popular among racketeers because of a
plentiful supply,acheaper price, and Thai men's desire to try "something different".
"International trafficking of sex workers needs to encroach the borders and reaching into the home of our neighbors," said Dr Kritaya.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရမှုမှ လွတ်လာပြီးနောက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်မှုနှင့် စီးပွါးရေး ဆိုင်ရာ အသက်ရှူမ၀ဖြစ်နေရသော အကြပ်တဲတို့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းလုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာပြည်မှ အမျိုးသမီးများသည် မျှတသော စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အခွင့်လမ်းနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုတို့အား ၄င်းတို့ခံစားကြရမည်ဟု အားတက်သရော အကြီးအကျယ်မျှော်လင့်နေခဲ့ကြသည်။ သို့သော်” ကျမတို့အနေဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားဘ၀များအတွက် ဘာတခုမှ မယ်မယ်ရရ အပြောင်းလဲအား မတွေ့သေးပဲ အပေါ်ယံ မိတ်ကပ်လိမ်းထားသော ပြောင်းလဲမှုမျိုးလောက်သာ ရှိနေသေးပါတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေရသော မနု မှ ပြောဆိုပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
After Aung San Suu Kyi was freed from her arrest, most of sex workers in Thailand because of economic crisis and political suppression on woman in their homeland eagerly expect to go back to their homes and to stand on equal political and economic rights. “We do not see transparent change for grass roots and it is changing on the surface asacosmetic change”, said Ma Nu who is still working inabrothel house in Thailand.
တင်ပြထားသော ဆောင်းပါသည် နိုင်ငံတကာနှင့် လက်တွေ ဖြတ်သန်းနေရသူ အမျိုးသမီးတို့မှ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်များ အဖြစ်ပျက်များအား ကောက်နုတ် တင်ပြထားသော ခိုင်လုံသည့် သက်သေ အထောက်ထားများ ဖြစ်ပါသည်။
(တရုတ်နယ်စပ်မှ အကြွေပန်းများအကြောင်း စွန့်စား ၇ိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအ ထောက်ထားများနှင့် တိကျစွာ မကြာခင် တင်ပြပါဦးမည်) ကြိုက်သလောက် ရှယ်နိုင်ပါသည်။ စာရေးသူအား ခရက်တစ် ပေးစေလိုပါသည်။
Posted by PNSjapan at 3:27 PM